တရုတ်တစ် ဦး Organothiophosphate ပိုးသတ်ဆေး Azamethiphos ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Senton
တစ်ခုက Organothiophosphate ပိုးသတ်ဆေး Azamethiphos
CAS အမှတ် .: 35575-96-3
Product အမည်: Azamethiphos
ထုပ်ပိုးခြင်း - 25KG / စည်, 100G/အိတ်ဆောင် သို့မဟုတ် Custimised လိုအပ်ချက်အဖြစ်
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား: တစ်နှစ်လျှင် 50 တန်
လက်မှတ်: က ISO 9001: 2015, GMP ။
HS Code: 29349990,21, 38089190.00
ဆိပ်ကမ်း ရှန်ဟိုင်း， Tianjin， Qingdao
Azamethiphos တစ် ဦး organothiophosphate ဖြစ်ပါတယ် ပိုးသတ်ဆေး။ အဲဒါကကုသရေး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ အညစ်အကြေးများယိုယွင်းနေသောအင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုထိန်းချုပ်ရန်အတ္တလန္တိတ်ဆော်လမွန်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုသုံးသည်။ Azamethiphosထုတ်ကုန်များ, Azamethiphos 95% Tech မှ, Azamethiphos 50% WP, Azamethiphos 10% WP နှင့် Azamethiphos 1% GB ကို။ Azamethiphos ကိုအရောင်မရှိသောမီးခိုးရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်များသို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံလိမ္မော်ရောင်အဝါရောင်အမှုန့်များအဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။
ICAMA လက်မှတ်၊ GMP လက်မှတ်အားလုံးရနိုင်သည်။
အဘို့အ Adulticides အဖြစ်အကောင်းဆုံးထိရောက်သောနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး ပျံသန်းမှုထိန်းချုပ်ရေး.
ဤထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အခြားထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်, ကဲ့သို့ ခြင် ပိုးသတ်ဆေး, တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုအလယ်အလတ်သဘာဝပိုးသတ်ဆေးများ၊ အင်းဆက်ပိုးမှုတ်ဆေး နှင့် so on.HEBEI SENTON သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှီယာဇွမ်ရှိနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ Agrochemicals၊API& အလယ်အလတ်နှင့်အခြေခံဓာတုပစ္စည်း။ ရေရှည်ပါတနာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကိုအမှီ ပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏ပြောင်းလဲနေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသင့်တော်ဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
စံပြဆေးကုသမှုဆေးဝါး Azamethiphos ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်းရှာဖွေနေပါသလား သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Colorless to Grey Crystalline Powder အားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်တွားတတ်သောအင်းဆက်ပိုးများ၏တရုတ်မူလစက်ရုံဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ရှေ့သို့ မြင့်မားသောထိရောက်မှုပိုးသတ်ဆေး Meperfluthrin
နောက်တစ်ခု: Broad Spectrum ဆက်သွယ်ရန် Fungicide Iprodione
တစ် ဦး Organophosphorus ပိုးသတ်ဆေး Azamethiphos
Polypeptide ပibိဇီဝဆေး Enramycin
ပိုးသတ်ဆေးစျေး Tetramethrin Permethrin
ဆေးဝါးအလယ်အလတ် Benzoic အက်ဆစ်